6 Mënyrat Suuq Ganacsigu Waa Sida Loo Toos Online
Home » Marketingu hyrës
09.05.2020 Category: Marketingu hyrës
Wixii milkiilayaasha ganacsiyada badan, "Suuq geynta" waa erey wasakh ah.
Adigu waad necbayd-is-daba-marin mana doonaysid inaad noqoto riixid. Oo adiguna maaha inaad ku qorto macluumaad adag iyo falanqeyn – aad ujecel tahay waxa aad qabato.
Waxaad Ka doorbidi laheyd inaad la xiriirto dadka kale ee Adi Ugu kalsoonidahay, fahamkooda, Iyo farxad ku saabsan waxa Adi tahay inaad bixiso – dadka jecel waxa Adi sameyso, oo drejtuar ahaantii Adi xiiseyneyso inaad taageerto ganacsigaaga.
Waa hagaag, haddii ay u psh tahay adiga, waxaan haystaa warka wanaagsan …
Taasi dhab ahaan waa maxay suuq-geynta wanaagsan.
Ma ahan in lagu cadaadiyo dadka aan daneynin waxa aad qabato. Ma ahan inaad si joogta ah uga hadashid naftaada adiga oo aan dhagaysan dhageystayaasha, mana aha wax ku saabsan tirooyinka iyo macluumaadka iyo falanqaynta.
Suuqgeynta wanaagsani waxay ku saabsan tahay helitaanka qofka saxda ah, iyaga oo lala xidhiidhayo, iyo horumarinta xidhiidh dhab ah.
Haddii aad u maleyneyso in sanqadhoodu ay ka yartahay qeexida suuq-geynta ka badan inta aad maqashay, xaq ayaad u leedahay … xaqiiqda, suuq-geynta wanaagsani waa wax badan oo is-dhaafsan online ah.
Haddii aad ku xayirtay inaad ku fekereyso suuq-geynta sida riixid iyo xanaaqa, ama qabow iyo kala-gooyo, iskuday in aad ka fekerto sida xiriirka internetka halkii aad ka heli laheyd talooyinkan 6.
1 1. Hayso Heerarkaaga Heerka sare
2 2. Isticmaal Qalabka saxda ah
3 3. Hubso inaad Bixinaysid Waxyaabaha a Doonayaan
4 4. Xusuusnow farriintaada
5 5. Ha ka Cajabin Tartanka
6 6. Noqo mes joogto ah
7 Miyuu Suuq-geynta Isku Raadi Karaa Online-Shirkad
1. Hayso Heerarkaaga Heerka sare
Haddii aad shukaansaneysid ama aad suuq geynaysid meheraddaada, ma tihid inaad qof walba la xiriirto; waxaad raadineysaa baba kufiican waxa aad bixineysid.
Markaad galeyso internetka shukaansiga, ma raadineysid inaad la kulanto qof iyo qof walba. Haddii aad raadineysid inaad ku bilawdo xiriir caafimaad oo guuleysi leh, waxaad u baahan tahay inaad Sameyso heerarkaas sarreeya oo taariikhda oo kaliya kuwa ku haboon baahidaada. Haddii kale, waxa aad lumisay waqti aad.
Markay suuq geynayaan ganacsigaaga, isku day inaad rafcaan u qaadato qof walba wuxuu ka tagi doonaa qulqulinta suuqgeynta oo aanad xiiseyneynin. Markaad qof walba bartilmaameedsanayso, dhab ahaantii qofna ma diidayo.
Inta badan diirada la saarayo iyo kuwa gaarka ah ee dhagaystayaasha ah, waa u fududahay inay iyaga gaaraan. Taasi waa sababta oo ah markaad haysatid qofka aad doonayso in aad maskaxda ku hayso, waxaad ogaan doontaa halka aad ka heli lahayd iyo sida loola xiriiro isaga.
Talo: Waxaa aad u sahlan in lazer-diirada saaro dadaalka suuq-geynta haddii aad u qeexday dhagaystayaashaada bartilmaameedka ah foomka a Qofka iibsada.
2. Isticmaal Qalabka saxda ah
Markaad qeexdid dhageystayaashaada bartilmaameedsan, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalabka saxda ah si loo gaaro dhagaystayaashaas.
Tani waxay u shaqaysaa shukaansiga, sidoo kale. Haddii aad raadineyso taariikhda geeky ka soo jeeda oo jecel inay waqti ku qaataan guriga oo ciyaaraya ciyaarta guddiga ama akhrinta buug wacan, ka dibna bararka qoob ka ciyaarka ah maahan meel wanaagsan oo lagu tao Bedelkeeda, waxaad ku biiri kartaa naadi buug ama waxaad tagi kartaa habeenkii ciyaarta guddiga ciyaarta dukaanka.
Haddii Aad ujeeddooyinkaaga ujeedadaada u tahay ganacsigaaga waa hogaamiyayaasha C-heerarka, ka dibna LinkedIn waa xulasho Aad u wanaagsan oo KA mesit ah Baraha warbaahinta bulshada si Aad u ganacsatid suuqa, intaad Ku daadin laheyd Tumblr waxay u badan tahay inay noqoto qashin waqtigaaga.
Waa inaad isticmaashaa goobaha saxda ah, qalabka, iyo xeeladaha si aad u gaarto dhagaystayaashaada.
Talo: Ka hyrë intaadan bilaabin suuq-geynta ganacsigaaga warbaahinta bulshada, Samee Baaritaanka si aad u ogaato waaxda warbaahinta bulshada ee kuu fiican.
3. Hubso inaad Bixinaysid Waxyaabaha a Doonayaan
Suuq-geynta iyo shukaansiga, waa muhiim inaad soo bandhigto naftaada ugu fiican.
Markaad shukaansho, waxaa muhiim ah inaad marka hore is daryeesho, labadaba jir ahaan iyo maskax ahaan labadaba. Dabcan, ka hor intaadan tagin taariikhda, waa inaad hubisaa inaad tahay mid soo jiidasho leh oo la soo bandhigi karo. Maya, uma baahnid inaad u ekaato sida bastoolada hawada lagu riixo, laakiin waxaad hubin doontaa inaad hubiso inaad nadiif tahay oo aad gashanayso. Waxaad sidoo kale dooneysaa inaad hubiso inaad ku faraxsan tahay naftaada ka hor inta aadan raadineynin Fulinta qof kale, ama waxaa laga yaabaa inaad ka soo baxdo niyad jab.
Ganacsi ahaan, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad bixiso wax aad dhagaystayaasha aad beegsaneyso rabto. Ka hor inta aan la samaynin dylli soo ama adeeg cusub, waxaa muhiim ah në la ansixiyo fikraddaada ka hor intaan la bilaabin.
Blogger-et, për të cilat blogeat hibeynaya janë më të mira, pasi të keni hyrë në dritare. Waa sahlan tahay in la yimaado fikrado hal abuur leh oo aad hubaal tahay inuu kuu sameyn doono lacag, kaliya si aad u ogaatid rafcaan inuusan u ahayn dhagaystayaashaada sida aad u maleyneysay inay tayay. Waxaa muhiim ah in aad siiso sida dhabta ah ee akhristeyaashu u rabaan, ma aha waxa adiga qabaa dylli rabaan.
Isku day qabashada sahammo si aad u ogaato waxa badeecada ama adeegga ay rafcaan u yeelanayaan dhageystayaashaada bartilmaameedka.
Xayeysiisyada ma ahan habka keliya ee lagu Sameeyn karo lacagta blogga. Tixgeli fursadahaaga inta aadan go’aan ka gaarin istaraatiijiga lacagbixinta ee bloggaaga.
4. Xusuusnow farriintaada
Da’da Internetka, qofna ma leeyahay dulqaad inuu akhriyo derbiyada jepadheer ee waaweyn, ha ahaato inuu ku jiro bogga shukaansiga ama bogga soo dega sheyga.
Ha u qaadanin në dadka xiiseynaya ay waqti qaadan doonaan si ay u akhristaan ​​qoraalkaaga oo dhan qaybaha muhiimka ah. Maalmahan, dadku waxay akhriyaan sawir. Waxaa jira macluumaad badan oo sheegaya in qofna uusan haysan waqti uu wax u akhriyo.
Haddii aad rabto në fariintaada la aqriyo, ku dhaji gaaban iyo barta. Go’aanso waxa qaybaha muhiimka ah ee muhiimka ah, oo xoogga saar kuwa.
Barashada qorista kinwaannada saxda ah qoraalada blogka ayaa kaa caawin doona inaad diirada saarto qoraalkaaga, ku haysato mawduuca iyo mowqifka, iyo sidoo kale ku hayso xiiso ku filan si aad u hesho farriimaha.
Haddii aad u maleyneyso in qoraalkaagu uu yahay mid caiji ah oo akhristayaashaada ah, hubi kuwaan 5 Fikradaha Ku Saabsan Lacagtaada Ganacsigaaga Ganacsiga.
5. Ha ka Cajabin Tartanka
Walaac xad dhaaf ah oo ku saabsan tartankaaga waa qashin waqti iyo tamar, suuq-geyn iyo shukaansi.
Ma jirto hab aad ku soo celin karto wixii shakhsi ama ganacsi kale ah, sidaa darteed maxaa sabab u ah?
Waxaa ugu wanaagsan in aan si toos ah loola tartamin adoo kakoobanaya tartankaaga – halkii aad diiradda saari lahayd sifooyinkaaga gaarka ah iyo waxa aad ku dari karto in tartamayaashu aysan awoodin.
Xilliga shukaansi, tani waxay noqon kartaa micnaheeda inaad diiradda saari karto boggaaga shukaansiga ee ku saabsan waxa ka dhigaya mid ka duwan kuwa kale
Suuqgeynta, tani waxay ka dhigan tahay kaliya in aad daawato tartanka ku filan si aad u hubiso inaad kala duwan tahay inaad ku rafcaanayso dhagaystayaasha kale. Ma aha fikrad aad u fiican inaad la dagaallanto isla bartilmaameedyada bartilmaameedka ah sida tartamayaashaada, markaad bartilmaameed u noqon karto dhagaystayaal kale oo aad adigu wadaagto.
Talo: U hubso inaad isha ku hayso niche ama warshadaha ku filan kala duwanaanta ganacsigaaga.
6. Noqo mes joogto ah
Haddii aad shukaansi jirtay dhowr bilood oo aadan helin jacaylka noloshaada, ma iska joojin lahayd?
Maya, dhab ahaantii maaha! Guusha waxay qaadataa wakhti iyo joogto ah.
Suuq geynta ma aha heshiis hal mar ah; waxay ubaahantahay në ay noqoto mes joogto ah si loo helo natiijooyin.
Haddii taatikada aad isticmaashid aysan ku siin doonin natiijooyinka aad rabto, haka deyn – isku day wax kale.
Haddii aad rabto in ganacsigaaga uu noqdo mid guuleysta, waxaad u baahan tahay inaad ku adkaysato inaad ereyga ka soo baxdo.
Hubso inaad hagaajinta maareynta waqtigaaga inay awoodaan inay qabtaan hawlaha suuq-geynta lagama maarmaanka u ah ganacsigaaga.
Isticmaal tabaha sida jadwalka, otomaatiga, iyo dibad-u-bixinta Waqti ku badbaadi hawlaha suuq-geynta.
Miyuu Suuq-geynta Isku Raadi Karaa Online-Shirkad
Waxaa laga yaabaa in ay u muuqato xoogaa gimmicky ah, laakiin dhammaadka, labadaba suuq geynta iyo shukaansi waxay ku saabsan yihiin horumarinta xiriirada! Haddii aad ka shaqayn karto horumarinta xidhiidhada shakhsi ahaaneed ee noloshaada, markaa waxaad haysataa waxa ay u qaadato si aad ganacsigaaga u suuq gasho.
Wixii milkiilayaasha ganacsiyada badan, "سوق جينتا" وا erey wasakh آه. Adigu waad necbayd-is-daba-marin mana
Wixii milkiilayaasha ganacsiyada badan, "Suuq geynta" waa erey wasakh ah. Adigu waad necbayd-is-daba-marin mana
6 viisi Suuq Ganacsigu Waa Sida Loo Toos Online
Wixii milkiilayaasha ganacsiyada badan, "Suuq geynta" Ваа Ери Уадах ах. Adigu waad necbayd-is-daba-marin mana
Llista completa de marques d’allotjament EIG (+ Recomanació d’allotjament no EIG)
Jaanuar Pulsuz Veb Hosting Saytları (2020)
Si të përdorni konferenca telefonike falas për të ndërtuar lexueshmërinë tuaj online
İşinizi pis bir veb hostundan qorumağın 10 yolu